आहा रुबिभ्याली! जाने होइन त घुम्‍न? [फोटोफिचर]
योगेन्द्र तामाङ बुधबार, मंसिर १, २०७८, ०७:१८
धादिङ जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ- रुबिभ्याली। पर्यटकीय स्थल रुबिभ्याली जति दुर्गम छ, त्यति नै मनोरम पनि।
हिमाली जीवनशैली, भेषभूषा, संस्कार, रीतिथिति र रहनसहन रुबिभ्यालीका विशेषता हुन्।
बागमती प्रदेशको विकट पहाडी भू-भागमा पर्ने रुबिभ्यालीमा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनका लागि स्थानीयस्तरबाट विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासहरु भइरहेका छन्। यद्यपि, पर्याप्त हुन सकेको छैन।
रुबिभ्यालीको सीमालाई धादिङ जिल्लाकै खनियाबास गाउँपालिका, गोरखा, नुवाकोट र रसुवा जिल्लासँगै छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि छोएको छ। साविक सेर्तुङ, तिप्लिङ र लापा गाविसलाई मिलाएर रुबिभ्याली गाउँपालिका बनाइएको छ।
रुबिभ्यालीमा नूनदेखि सुनसम्म पाइने भनाइ रहेको छ। बहुमूल्य धातु रुबि पाइने भएकोले यस उपत्यकाको नाम रुबिभ्याली रहन गएको बताइन्छ। यस क्षेत्रमा बहुमूल्य खनिज क्रिस्टलसमेत पाइन्छ।
यहाँ विशेषगरी गणेश हिमाल, प्यल्दोरपिक हिमाल, पाङसाङ पास, सिङला माने, कालो दह/सेतो दह, गणेशकुण्ड, दूधकुण्ड, तातोपानी कुण्ड, दुर्लभ वन्यजन्तुहरु, विभिन्न जडीबुटी र हिमाली मनोरम दृष्यका साथै स्थानीय परम्परागत कला संस्कृति अवलोकन गर्न सकिन्छ।
रुबिभ्याली अवलोकन गर्न चाहनेले न्यून खर्चमै यहाँको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। धादिङबेसीबाट दामन पाख्रिनमार्ग हुँदै सवारी र पदयात्रा दुवै माध्यमबाट रुबिभ्याली पुग्न सकिन्छ।
रसुवा जिल्लाको स्याप्रुबेसी हुँदै सोमदाङबाट पनि सवारी र पदयात्रा तय गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, नुवाकोटको भाल्चेबाट रुपचेत हुँदै सिङलापास गरी रुबिभ्याली पुग्न सकिन्छ। गोरखाबाट पनि रुबिभ्याली पुग्न सकिन्छ।
रुबिभ्यालीमा विशेषगरी तामाङ र गुरुङ जातिको बसोबास रहेको छ। यहाँको स्थानीय भाषा, पहिरन, कला, संस्कृतिले आगन्तुकहरुलाई लोभ्याउने गर्दछ।
यसकारण नवजात शिशुलाई मुटुरोगको जोखिम धेरै, सम्भव छ उपचार नवजात शिशुहरुमा जन्मजात नै विभिन्न रोग देखिन सक्छन्। तीमध्ये बाल मुटुरोग अहिले आमसमस्या भएको छ। बुधबार, मंसिर ८, २०७८
दुई वर्षपछि भ्लादमिर पुटिन र नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता हुँदै सोमबार, मंसिर २०, २०७८
नेपाल बैंकको बुक क्लोज मंगलबार सोमबार, मंसिर २०, २०७८
शिकार खेल्ने क्रममा गोली लागेर एक जनाको मृत्यु सोमबार, मंसिर २०, २०७८
काभ्रेमा संगठन विस्तारलाई तिब्रता दिँदै एकीकृत–सामाजवादी सोमबार, मंसिर २०, २०७८